James Swan oo baaq kasoo saaray doorashada Soomaaliya kadib kulankii Qoor Qoor
James Swan iyo Qoor Qoor
Wakiilka xogyahaha guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya, oo maanta magaalada Dhuusamarebe kula kulmay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayaa faah-faahin ka bixiyey waxyaabihii ay ka wada-hadleen.
James Swan, oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka, ayaa sheegay inuu Qoor Qoor kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin taageerada ay QM siiso Galmudug, iyo xaaladda siyaasadda ee Soomaaliya, oo hadda uu ka jiro is-mari waa ka taagan qabashada doorashooyinka dalka.
Swan ayaa sheegay inuu Qoor Qoor ku bogaadiyey “dadaallada uu wado ee uu isugu dayayo inuu ku xalliyo muranka ka taagan fulinta qorshaha doorashada.”
“Waxaan ku booriyey inuu sii wado kaalinta uu cayaarayo ee ah joogteynta xiriirka u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah federaalka,” ayuu yiri James Swan.
Ergeyga QM ayaa intaas ku daray inuu kala hadlay madaxweyne Qoor Qoor muhiimadda ay leedahay in la xalliyo arrimo taagan ee xasaasiga ah, si Soomaaliya ay uga dhacdo doorasho la isku haleyn karo.
“Waxaan mar kale ku celiyey aragtida saaxiibada caalamiga ee ah in heshiis iyo wada-shaqeyn lagu hormarinayo waxa u wanaagsan dalka ay tahay waxa iminka looga baahan yahay Soomaalida, si loo xaqiijiyo in Soomaaliya ay kusii taagnaato waddada nabadda iyo xasilloonida,” ayuu yiri James Swan.